Xayawaan caan kanoqday baraha bulshada | Somali National Television - sntv.so
Home MAQAALLO Xayawaan caan kanoqday baraha bulshada
Xayawaan caan kanoqday baraha bulshada
Waa Ey ku nool waddooyinka, oo lagu magacaabo Boji, kaas oo jecel inuu ku safro gaadiidka magaalada ugu weyn Turkiga.
Wuxuu raacaa basaska, tareenada dhulka hoostiisa mara iyo doomaha.
Qofna ma oga sida uu u bartay nidaamka ku safarka gaadiidka dadweynaha.
Laakiin darawal kaxeeya mid ka mid ah basaska korontada ku shaqeeya ayaa sheegay in ay yaqaaniin Boji, sidoo kalena in asluubtiisa iyo akhlaaqdiisa marka uu fuulayo iyo ka degaya baabuurkiisa ay tahay inuu tusaale u noqdo dhammaan rakaabka aadanaha.
Boji waxa uu si joogto ah u kasbaday quluubta dadka deggan Istanbul, isaga oo sidoo kale dad badan ka dhigayay in ay la yaaban yihiin sida uu ula qabsaday caadada safarkan oo kale.
Aylin Erol, oo u shaqeysa Metro Istanbul, ayaa sheegay ka dib markii ay arkeen sawirada Eyga oo lagu faafiyay baraha bulshada, ay go’aansadeen inay ku xiraan microchip si ay ula socdaan dhaqdhaqaaqiisa saxda ah.
Iyaga oo yaaban, waxay ogaadeen in Boji uu soo maraa ugu yaraan 29 metro stations maalin kasta, wuxuuna gaari karaa masaafo dhan illaa 30km maalintii.
Magaalada Istanbul oo labadeeda goonyood ku kala taala xeebaha Yurub Aasiya,ayaa waxay leedahay nidaam gaadiidka doomaha oo aad u dhib badan, balse waa arrin u sahlan Boji in uu ku goosho.
Xitaa waxaa lagu arkay badda isagoo safar ku tagaya jasiiradaha Prince ee ku taala ee ku taala badda Marmara, taas oo duleedka ka ah xeebta Istanbul.
Caannimada sii kordheysa ee Boji waxaa ku lammaan Twitter magaciisa lagu sameeyay.
bogga @boji_ist waxaa ku xiran in ka badan 90,000 oo qof tan iyo markii ciwaankan la furey la Sebtembar.
“Wuxuu garanayaa meesha uu aadayo, wuu yaqaan meesha laga baxo,” ayay tiri Aylin Erol oo ah sarkaalad gaadiidka.
Boji ayaa la siiyay talaal si loo illaaliyo isaga iyo dadka kale ee ku xeeran.
Aalad kale oo birlab ah oo ku xiran app-ka mobaylka waxa uu u ogolaanayaa mas’uuliyiinta in ay la socdaan xaalkiisa caafimaad.
Shaqaalaha gaadiidku waxay hubiyaan inuu si fiican wax u cuno oo uu cabbo biyaha. Waxa kale oo si joogto ah baaris caafimaad ugu sameeya dhakhtarka xoolaha ee dawladda.
Qoraal iyo muuqaal lasoo dhigay ciwaanka magaca Boji lagu sameeyay ayaa muujinaya culeyskiisu yahay 42kg, isaga oo u eg in uu qiranayo in uu culeeskiisa kordhay.
Marka loo eego xogta raadaarka lagu xirey, habka gaadiidka ee uu jecel yahay Boji waa taraamka kab loo yaqaano, waa nooca gaadiid ee ku shaqeeya korontada ee basaska dhaadheer ah
Boji waa ereyga Turkiga ee “bogie”, waa qalab qaab dhismeedkiisa la geliyo taayirooyinka baabuurta si gaadhiga loo siiyo xasillooni dheeraad ah inta lagu jiro safarka.
Sida muuqata, waa sida uu magaciisa ku helay, shaqaalaha gaadiidku waxay bilaabeen inay ugu yeedhaan Boji, ka dib markii si joogto ah loogu arkay meel ka sarraysa qaybta bogie ee baabuurta.
Maadaama uu noqday weji la yaqaan, Boji hadda waxaa soo dhaweeya rakaab badan oo si tartiib ah u salaama, ama sawir selfie ah la gala.
Marka loo eego adeegyada caafimaadka xoolaha ee dawladda hoose ee Istanbul, magaaladu waxay hoy u tahay in ka badan 300,000 oo bisado iyo eeyo ah, laakiin dadka qaar ayaa aaminsan inay taasi tahay qiyaas hooseysa.
Xayawaankan ka duwan kuwa kale ayaa arrin hadalhayn leh ku noqday dadka deggan Istanbul.
Sagaashameeyadii, magaaladu waxay dirtay kooxo dabargoyn si ay wax uga qabtaan tirada sii kordhaysa ee bisadaha iyo eyda.
Laakiin walaac dadweyne ka dib, siyaasaddaas waa la joojiyey.
Hadda saraakiisha dawladda hoose waxay qabtaan xoolaha oo kaliya si ay u tallaalaan oo ay u daaweeyaan wixii dhibaato caafimaad ah.
Boji xaqiiqdii si fiican ayaa looga hadal hayaa Istanbul.
“Waxaad raacdaa tareenka, si lama filaan ah, waxaad arkeysaa Boji,” ayay tiri Aylin Erol.
Previous articleDowladda Uganda oo xir xirtay 48 Ruux
Next articleIiraan oo sheegtay inay fashilisay Markab Mareykanku damacsanaa in uu afduubto
Waa kuma Maxamed Xasan Akhund – madaxa xukuumadda cusub ee Taliban?
AFRICOM oo ku baaqday in la dardargeliyo hawlgalada ka dhanka ah Al-shabaab (WARBIXIN)
Madaxweynaha galmudug oo ciidamada qalabka sida uga mahadceliyey guulihii ay ka...